के आधुनिक मानिसको डर छ? वास्तवमा, सबैलाई आफ्नै डर छ। कसैले संसारमा बरु गाह्रो अवस्था दिइएको, धेरै अचम्मको छ, कि, काम सँग सम्बन्धित अलार्म बन्द छैन, कसैलाई प्रेम एक, कसैले एक्लै हुनुको भाग्य को डर गुमाउने डर छ। र कसैले डाक्टर गर्न "तिर्थयात्रा" सबै आफ्नो मुक्त समय बिताउनुहुन्छ। र यो, फेरि, त्यहाँ अनौठो केही छ।
बीस-प्रथम शताब्दीमा को रोगहरु
"म बाहेक, सबै रोग फेला गरेको छ puerperal ज्वरो!" - एक क्लासिक चिच्याउँछन्। वास्तवमा, सबै छैन त्यस्तो क्यान्सर रूपमा, किनभने रोग को, देखिन्छ रूपमा हास्यास्पद छ, यो एक सय वर्ष पहिले भन्दा धेरै बढी छली छ। अब एक मानिस बाँच्न सक्छ र उहाँले चरण चार क्यान्सर थियो कि छैन थाहा छ। नियम, यो रोग को तेस्रो चरण मा, हुनत केही पाठ्यक्रम, अस्पताल बाहिर बाँच्न सक्छ सक्नुहुन्छ बर्बाद छ।
चमत्कारी निको पार्ने
यो क्यान्सर ख्रीष्ट वा समयमा अस्तित्व छ कि छैन ज्ञात छैन। यो भयानक रोग को पहिलो उल्लेख मिश्रको पांडुलिपियहरुमा पत्ता थिए, तर यो प्यालेस्टाइन र इजरायल इलाका विस्तार भएको थियो, यो ज्ञात छैन। तर येशूले कुष्ठरोगियहरुको, अन्धा, लङ्गडाको, बहिरो, को लाटा निको ... र पुनरुत्थान। उहाँको जानुभन्दा पछि, यो शक्ति प्रेरितहरूलाई दिइएको थियो, र परम्परा देखि हामी लास मा गिर, उहाँलाई खडा जो सेन्ट पत्रुसको को छाया, रूप थाहा छ। हाल, गम्भीर रोगहरूबाट वा तिनीहरूको प्रियजनलाई बिरामी आफूलाई भएको थियो सामना गर्दै गर्नेहरूलाई अनुसार, उहाँले सेन्ट लूका वास्तविक चमत्कार प्रार्थना सिर्जना गर्छ।
सेन्ट ल्यूक क्राइमन को चमत्कार
एक पटक उहाँले एक डाक्टर र औषधि को एक प्रोफेसर थियो। purulent सर्जरी कार्य धेरै पुरस्कार पनि जितेको छ, तर अर्थोडक्स मसीहीहरूले सेन्ट लूका स्वास्थ्य एउटा अद्भुत चिकित्सा, र प्रार्थना तिनलाई श्रद्धा, निस्सन्देह, दिल बाट पढ्न र मद्दत गर्छ र सुखसुविधा।
कुनै कुरा skeptics संसारमा छ incredulously grinned कति जो जो कोहि द्वारा बताए गर्न सकिन्छ कुरा हो। विश्वासीहरूलाई यो एक चमत्कार कल, atheists - मानव शरीर को unexplored सुविधाहरू। यहाँ, किनभने, सबै को पहिलो, "कुकुर छाल, तर कारवां मा जान्छ" तर्क गर्न बेकारी छ, र दोश्रो, निको बारेमा सेन्ट लूका प्रार्थना, जस्तै, साँच्चै, र अन्य प्रार्थना, सुनेका छ के विश्वास गर्ने मात्र ती मद्दत गर्छ, आफ्नो शक्ति मा विश्वास गर्छन्।
छैन त लामो पहिले सार्वजनिक केही जवान pianist गम्भीर चोट पछि औंलाहरु को संयोजी ऊतक निको पार्नुहुन्छ भन्ने समाचार भड्काए। जवान अनुसार, त्यो सेन्ट लूका, आफ्नो आमा शाब्दिक दिनमा पढ्न जो प्रार्थना मदत गरे।
अर्को मानिस, बाटो, सार्वजनिक पहिचान गरेर, एकचोटि, एक जटिल हृदय शल्य चिकित्सा पछि उठ्दै, उहाँले सेन्ट लूका आफ्नो ओछ्यान छेउमा उभिरहेको देखे कसरी आफ्नो हात प्रार्थनामा उठाएको संग वर्णन। जो सञ्चालनको परिणाम लागि प्रतीक्षा थियो आमा र पत्नी, पछि मद्दत लागि सेन्ट फैलन, सबै समय भने। बिन्ती गरे। र अवस्थामा सयौं र हजारौं छन्।
अब सेन्ट लूका को नातिनातिनी को क्राइमन डाक्टर पनि काम र एक पटक प्रोफेसर Voyno-Yasenetsky (लूका) द्वारा भने प्राण बारेमा प्रश्न प्रतिक्रिया वाक्यांश परिवार लोकगीत प्रविष्ट याद गर्नुहोस्। तिनीहरू साँचो मनले एक डाक्टर, विशेष गरी सर्जन, एक नास्तिक हुन सक्दैन, त्यो र एक दिन सेन्ट लूका प्रार्थना डाक्टर द्वारा पढ्न सबै दुनिया भर भनेर सपना विश्वास गर्छन्।
परमेश्वरको आमा को Korsun प्रतिमा: मूल्य
औषधि "Tsetrin"। सङ्केत गर्छ र contraindications
Warcraft को विश्व: वाह कालो बजार। को धेरै को लागत र Pandaria र Draenor मा बजार को स्थान
नासपाती र नियन्त्रण साधारण रोगहरु
चिली, Atacama मा harshest मरुभूमि
टमाटर "डेमिडो": विविधता को वर्णन
स्वास्थ्य र सौन्दर्य लागि - मेवा को उपयोगी गुणहरू
प्रति Bezuhov: वर्ण को कैरेक्टराइजेशन। जीवन पथ, बाटो खोजी पियरे पियरे
एक नमूना फारम र सिफारिसहरू: अदालत एउटा आवेदन कसरी लेख्न